Skydiving ~ Journey-Assist - Ny toerana tsara indrindra ho an'ny lanitra.
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Sidina Mifohaza » skydiving
Skydiving (skydiving) - Fandikana mivantana avy amin'ny anglisy - "milentika any an-danitra". Ary ny anarana tena marina kokoa, angamba, dia tsy mora ny mitondra azy :).
Saingy amin'ny fiafarany dia ny fahatsiarovan'ny lanitra dia fahatsapana ny fahalavoana maimaim-poana raha vao mitsambikina avy amin'ny fiaramanidina ianao mba hanambarana elon'aina. Ary tena azo antoka fa io dia iray amin'ireo fomba mahavariana sy manaitra indrindra handaniany fotoana;).
Etsy ambany dia hanainga isika Ny faritra tsara indrindra misy habakabaka tsara tarehy eran-tany, izao anefa, andeha hojerentsika io karazana fialamboly io:
Raha ny fitsipika, amin'ny fitsangantsanganana mahazatra mahazatra dia mitsambikina avy any amin'ny haavon'ny 1-5km. Satria avo be ny hafainganam-pandehan'ny gravitation (maherin'ny 200 km / ora), ny faharetan'ny sidina mandra-hisokafan'ny parachute matetika dia tsy mihoatra ny iray minitra.
Azonao atao ny "misitrika" mankany an-danitra amin'ny habakabaka avo kokoa, fa noho izany dia mila mampiasa fitaovana fanampiny ianao izay ahafahanao mitondra rivotra tsy fahita sy mangatsiaka amin'ny habakabaka ambony.
Raha mitsambikina mahazatra (hatramin'ny 5000m), ny fetin'ny Skydiver faran'izay kely indrindra dia:
Akanjo tsy miadana, tsy misy hazakazaka, na akanjo manokana;
Fiarovana: solomaso, satroka, fonon-tanana;
Altimeter (altimeter) miaraka amin'ny fampandrenesana feo;
Ary mazava ho azy fa tsara ny tsy manadino ny rafitra parachute :);
Fitaovana fiarovana ho an'ny fiara (famerimberina in-droa isan-tsegondra iray dia mamaritra ny fihenan'ny mari-pandrefesana amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny tsindry sy ny mari-pana, ary raha mbola mihena ny habakabaka amin'ny haavon'ny sasany, ny tenany ihany no manokatra ilay parachute).
Ho an'ny fitsambikinana mahaleo tena dia tsy maintsy maka ny Mazava ho azy maimaim-poana ianao (AFF) - fandaharam-panofanana manokana, mitentina iray tapitrisa sy iray tapitrisa dolara, ekena manerana an'izao tontolo izao. Misy ambaratonga 8 izany ary matetika dia mandalo 6-8 andro mitsambikina.
Afaka mitsambikina tsy misy AFF ianao, fa miaraka amin'ny dome boribory ihany (fitsangantsanganana parachute). Ary noho ny hitsambikina avy Domeo mahitsy (paraglider, elatra), takiana ny fiofanana. Amin'ny faran'ny farany dia mamoaka fahazoan-dàlana iraisampirenena ahafahan'ny "skydiving", ary na dia eo aza nyome ...elatra»Any amin'ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao.
Seza iray amin'ny fiaramanidina (amin'ny maha vondrona azy) dia mitentina 20-25 dolara isaky ny hitsambikina.
Ny fanofaanana Parachute - $ 10-15.
Mahatratra 4 ny parachute vaovao iray. $.
Ny fisondrotana ambaratonga fidirana (haavony 800m) dia mitentina eo ho eo amin'ny $ 50 (kitapo + fitaovana + mitsambikina)
Ny fitsambikina iray miaraka amin'ny mpampianatra dia manomboka amin'ny $ 150.
Mazava ho azy fa mety misy serivisy fanampiny. Ohatra, sary fitifirana sary, Ampio amin'ny fametrahana parachute, fanafohezana fanampiny sy ny maro hafa.
Ny sandan'ny vondrona mitsambikina ho an'ny olona 2-3 any amin'ny toerana malaza amin'ity izao tontolo izao, manomboka amin'ny $ 300
Freeware, araka ny hevitr'ilay anarana, dia ny fahalalahana asa indrindra. Misy asa iray, ny mankafy ny fahatsapana feno ny fahafahana araka izay azo atao. na iza na iza, misy singa manambana (peratra vita amin'ny volontany, saina, baomba setroka ary izay tianao). Mety ho avy amin'izany, angamba, ny tokony hanombohan'olon-kafa miaraka amin'ny lanitra.
Raha mankaleo ny mitsambikina irery, dia afaka misarika anao ho namana foana ianao, ary amin'ny fanaovana «diving» dia manao acrobatics vondrona :). Tsy ho mankaleo izany! :). Sarotra ny manantona zavatra hafahafa kokoa.
Freefly (Free fly)
Freefly - sidina malalaka. Ny maha-mampiavaka an'io karazana io dia ny singa akrobatika be mpampiasa ary ny zava-misy, amin'ny maha fitsipika dia olona roa no mandray anjara amin'ny harinkarena. Azonao atao ny mandamina daty tena tany am-boalohany 🙂
Sky surf. Toa izany daholo. Mazava ny zavatra rehetra :). Mono-ski mitsambikina (zavatra sahala amin'ny snowboard na surfboard). Ary raha tratran'ny onjam-peo mahitsy amin'ity tabilao ity ianao, dia ho afaka hihetsika tsy amin'ny lafiny vertikal fotsiny ianao, fa koa amin'ny fomba fiasa. Zahao ilay video, dia ho azonao ny hatsaranao any amin'ny lanitra :).
Wingsuit - wing-suit, nadika ara-bakiteny. Ity fialam-boly tanora ity dia nahavita lasa fifehezana misaraka amin'ny famoahana lanitra, ka dia nanokana pejy manokana izahay. Izahay eto.
Ho an'ireo izay te hahatakatra hoe inona ny karazana fahatsapana ananan'ireo mpanamory sambon-danitra, nefa mbola tsy vonona hitsambikina avy amin'ny haavon'ny kilometatra maromaro izy ireo, misy ny lalambe manokana an'ny rivotra izay mamela izany. Ampiasain'ny mpandray anjara mavitrika izy ireo hianatra ny fototry ny lanitra. Ary eo amin'ireo matihanina, ilaina ny fantson-drivotra, satria eo amboniny dia azonao atao ny mampihena ny fahaizanao. Ary mazava ho azy fa afaka mahita zavatra mahafinaritra fotsiny ianao :).
Mazava ho azy fa tsy adinonao loza ity karazana fialamboly. Skydiving manana contraindications:
Mampikorontana amin'ny fiasan'ny fitaovana vestibular
Asma sy aretina hafa taovam-pisefoana
Tsara homarihina koa fa ny aretina tsy maharitra, toy ny orona mihazakazaka, hatsiaka ary otitis media, dia ho contraindication koa.
Karakarao ny tenanao. Hitanareo fa samy hafa be izao tontolo izao sy tombontsoa maro mahaliana ny manokana fotoana! 😉
Ny faritra tsara indrindra misy habakabaka tsara tarehy eran-tany
Interlaken dia toerana mahafinaritra. Eto, voahodidin'ny tendrombohitra Soisa, avy amin'ny haavo iray manokatra ireo fijery mahavariana ireo firenena miova eto amin'ity toerana ity - i Italia, France, Austria ary Alemana.
Afaka mandeha eny avaratr'i Pattaya ianao amin'ny faritry ny fitrandrahana Nong Kho mahafinaritra (Nong Ho). Ary, angamba, no iray amin'ireo toerana tsara tarehy indrindra amin'ity Azia Atsimo Atsinanana ity.
Ny tambajotra kanto ao amin'ny Nosy Jumeirah any Dubai, any UAE, dia iray amin'ireo vongan-javaboary mahavariana indrindra.
Fox glacier. Fox Glacier dia glacier valo kilometatra ao amin'ny Westland National Park ao amin'ny South Island of New Zealand. Tena mahavariana amin'ny halaviran'ny kilometatra maromaro.
Haran-dranomasina lehibe, any Aostralia
Ny Haran-dranomasina Lehibe. Ny Great Barrier Reef any Aostralia, zavatra tsy manam-paharoa sy tsy takatry ny saina izay manintona ny lanitra amin'ny vazantany rehetra.